Iqale ngencwadi yesikhundla esibe siyile sayiprinta kwiibhetshi ezincinci sisebenzisa acatshulweyo (Esinye isixhobo esikhulu). Siwathandile amava okuntywiliselwa kwincwadi-ubunzima bayo busezandleni zakho, amaphepha agudileyo e-matte, kunye nokubrawuza ekuzonwabiseni kwakho. Njengoko saqala ukuprinta, sabelana kunye neFedEx'ing ezi ncwadi kwilizwe liphela, saqonda ukuba sidinga enye indlela yokwabelana ngomxholo wethu. Isicwangciso esicocekileyo sokuprinta silinganiselwe, nokuba kungabiza ngendleko, ukuba lula kohlaziyo, okanye ixesha lokuhambisa. Sifuna indlela yokuhambisa amava encwadi, kwimfuno.
Isisombululo sethu sisifumene ku-Issuu, iqonga losasazo lwedijithali elisenze ukuba sabelane ngomsebenzi wethu nabaphulaphuli abaninzi kwaye sisahambisa amava amahle. U-Issuu ugcina ezinye zeempawu ezithandekayo kwincwadi ebonakalayo (egxile kwaye ekhangeleka) kwaye ayigcwalise ngamandla eqonga le-Intanethi (ekwabelwana ngokukhawuleza, ekuhlaziyeni ngokulula nangexabiso eliphantsi). Ababhenkethi banokwenza ubhontsi ngohlobo olupheleleyo lwefayile ye- incwadi yethu kwi-intanethi (jonga ngezantsi!), Kwaye wabelane ngamaphepha (okanye upapasho lonke) kunye nabahlobo babo kunye noogxa. Ngelixa sivuma, kunzima ukuyibuyisela endaweni ikopi yencwadi ebusuku, kuba uninzi lweziganeko, u-Issuu usebenza ngokukuko kwaye ufikelela kubanzi- yiyo loo nto igcina sisebenzisa isixhobo.
Ndithetha nje nomthengi namhlanje kwaye ndabelana ngale posi, uJanneane. Baprinta iitoni zeencwadana ezikumgangatho ophezulu kakhulu kwimigca yemveliso yabo. Oku kunokuba yindlela efanelekileyo yokwabelana ngezo ncwadana kunye nabaphulaphuli bazo ngokwamanani. Enkosi ngale posi - itekhnoloji entle kakhulu kwaye ndiyayithanda i-KA + Incwadana ... Ndijonge phambili kumhla endinokusebenza neqela lakho ukulungisa izinto zethu!